Hazvityisi kana iwe usina, nekuti hazvizonetsa kuti uwane nekunyora typing kubva kubhobhodhi uchishandisa nhepfenyuro yakateedzana. Zvinosetsa sei kutaura muhurukuro yevhidhiyo, kutumira tsamba dzerudo pasina kana kukanganisa vhidhiyo kutepfenyura.
Roulette vhidhiyo yekukurukura nevasikana 18 makore apfuura akaonekwa seasina kujairika. Sezvo pakanga pasina webhu kamera, maikorofoni kukombuta ... Inobvumirwa ipapo kuenderera nhaurirano sekuda kwayo. Sezvo ndaratidza kufarira kuchinyorwa - nhoroondo diki. "Rulet" videochat - iro zita rakajairika izvozvi, asi wakambofunga nezvenhoroondo yekwakabva zita iri? Iyo dudziro inotsanangurwa neake akasununguka, akajairika chimiro chebasa: musanganiswa wezvaungaitwa unoitwa semutambo wakasarudzika wenhamba dzinoenderana. Zvisingafungidzirwe, asi dzimwe nguva zvisingatarisirwi. Anopikisa anosarudzwa otomatiki nechirongwa, iwe unobatanidza kune isina kujairika inopindirana. Kutendeuka pane fungidziro - inzwa mufaro uyu nemutorwa anobva kune imwe nyika, nzwisisa mutsauko uri kure - anogona kunge ari mukondinendi.Uye kukura kwemeso makuru - kuona muvakidzani kana hama pachiratidziri ... Joke haina kujairika uye inoenderana ne1: 100000 zviitiko. Nekuda kwekushamisika kwayo, inonzi "zvisina kujairika". Zvikuru uye zvakakura - rombo rakanaka sei, mune zvimwe zvinhu, senge mutambo wekare werombo. Wakaneta nhaurirano iyi - tanga kutsvaga inotevera ye twitter, kana usingaifarire - pfuurira kutsvaga zvakare kusvikira wawana zvaunoda. Kufambira mberi kwekufamba uye maitiro acho anokwezva, kazhinji haugone kuzvibvarura. Rudzi rwemutambo, kupindwa muropa uye kunakidza. Zviri muropa kurasikirwa nhambo yenguva, kuti nguva yekuzorora inomhanya zvakadii. Iwe urikutsvaga sosi uko iwe kwaunogona mune yerudo marongero nekushandisa kuri nyore - "zvehukama hukama chirongwa" - zvako. Nhaurirano yepasi rese chiitiko chinoshamisira, pamwe nekuwanda kwehuwandu mumakore achangopfuura. Ita kuzivana nemunhu,kurarama wakatarisana nepasi renyika - izvozvi chokwadi, kutamba kwembambo kana hushamwari - zvinogona kuwanikwa nekuda kwekutaurirana kwepasi rese. Chiitiko chisingakanganwike, chemanzwiro, chekuziva nerudzi rwakasiyana, iwe unogona kunzwa, rangarira kweupenyu hwese. Kudzidzira nevatorwa hakuzotambisi. Zviratidzo zvakajeka zvinosiya chiratidzo chisingakanganwiki. Kune vazhinji, pachave nedambudziko risingakundike - mutauro wedudziro. Kune mashoma polyglots uye zvakaoma chaizvo kuziva zvakakwana mutauro weimwe nyika dzepasi. Kutsvaga mumwe munhu wekutaura naye inyaya yemasekonzi maviri, asi kuti unzwisise zvaanotaura zvatova nematambudziko ... Zvakakosha kuti iwe uzvitsanangure uye uzvitsanangure. Vanoda mitauro yekune dzimwe nyika vachafadzwa neyakareruka tsika, unofanira kubvuma. Zvakanaka, parizvino, ngatidzokere kumudzi - hombe hombe inoda dzakasiyana mukutaura, kwete kuvandudza ruzivo rwavo ...zvirinani kushandisa ruzivo rwechizvarwa uye chinodiwa izwi reRussia. Iyo yazvino yeRussia vhidhiyo yekukurukurirana yakagadzirirwa vateereri vateereri. Iyo webhusaiti inosvikika yakagadzirirwa kuona ichaita kuti zvive nyore kuwana mumwe munhu akashandisa mutauro mumwechete mukutaura kwakazara sewe. Sezvingatarisirwa, mune iyi kesi, kutaurirana naye kuchaenderera pasina zvipingamupinyi. Kunzwisisana nekuzivana kutsva kunovimbisa, nguva yakanaka yakashandiswa, dzakasiyana misoro - haizoregi iwe uchinetseka muhurukuro yako yevhidhiyo yaunofarira, asi zvinounza mufaro, kusununguka kwauchayeuka kana uri kure neInternet kubatana.Sezvingatarisirwa, mune iyi kesi, kutaurirana naye kuchaenderera pasina zvipingamupinyi. Kunzwisisana nekuzivana kutsva kunovimbisa, nguva yakanaka yakashandiswa, dzakasiyana misoro - haizoregi iwe uchinetseka muhurukuro yako yevhidhiyo yaunofarira, asi zvinounza mufaro, kusununguka kwauchayeuka kana uri kure neInternet kubatana.Sezvingatarisirwa, mune iyi kesi, kutaurirana naye kuchaenderera pasina zvipingamupinyi. Kunzwisisana nekuzivana kutsva kunovimbisa, nguva yakanaka yakashandiswa, dzakasiyana misoro - haizoregi iwe uchinetseka muhurukuro yako yevhidhiyo yaunofarira, asi zvinounza mufaro, kusununguka kwauchayeuka kana uri kure neInternet kubatana.
Tinoda kukwevera ngwariro kune yakakurumbira, yakashanyirwa yakawanda yevhidhiyo yeRussia yeInternet - chat roulette. Iyo nguva inopedzwa inonakidza, ine basa remhando yepamusoro resaiti, ichaita kuti unzwe semunhu anodikanwa kwazvo, munhu anodiwa munyika. Vazivikanwi vatsva vachafara kukuona zvakare muvhidhiyo nhepfenyuro, iwe pachako. Usarase zvinodzivirira kubva pamusoro wako. Usavimba nevatorwa. Kana iri sevhisi, isu tinofara kukuona iwe uye nekukubatsira iwe kugadzirisa chero dambudziko maererano nekuita kwesevhisi.
Kuti udzivise kusanzwisisika kwekutanga kukundikana kwekuvapo kwemhando nechinangwa chakashata - kutanga kutaurirana, usati washandisa hurukuro yevhidhiyo - enda kunyore nyore. Hazvizotora nguva yakawanda, usazvidya moyo. Pane zvinopesana, zvicharerutsa nzira yekufambidzana uye kutaurirana. Usatende - saka pfuurira kune dhizaini izvozvi kuti uve nechokwadi.
Vhidhiyo yekutaura roulette - kunyaradza uye nyore kubata pamwe neashoma ezviito zvevanhu vari kutaurirana mairi. Iwe unokwanisa kunyora mameseji, zvinofadza mafeni eruzhinji. network kana ICQ uye Skype tsamba. Mukutaura, vanhu vazhinji vanoona imwe isiri yakakosha - mukana uri nyore wekuchengetedza nhoroondo yemeseji. Mushure mekusavapo kwenguva refu - uno "pfuura" zvinyorwa zvehurukuro uye rangarira zvawakataura nezvazvo kekupedzisira nemumwe munhu akanyorera.
Nyanzvi dzakaedza kusimudza mashandiro eiyo sosi kune iyo nhanho yakakodzera, kuita shamwari dzinojairika nekuwedzera mushandisi kune rondedzero yeshamwari (kana iwe uine rumwe rudzi rwekunzwira tsitsi kune anopindirana uye uchinzwa kuda kuitisa nhaurirano. kakawanda kana kungoita havadi kurasikirwa nekubatana nemunhu wacho). Mune ino kesi, zviri zvepakutanga kuziva kuti anenge achinyorera achange ari mukubata zvakare kuti atangezve kutaurirana naye. Saizvozvowo, semumapurogiramu ezvevanhu - isu tine mukana wekutsinhana zvipo. Izvo zvinodiwa ndezvekutenga chaiwo mari. Kuratidza rudo nenzira iyi chiito chepamusoro-soro, munzvimbo nhete. Haasi munhu wese anogona kupa chipo kune vhidhiyo yekutaura mutengi, nekuti haazi munhu wese anokwanisa kupa, uye mukana wakadaro unofadza uyo akapiwa chipo ichi. Kutendeseka kwemanzwiromakorokoto pachiitiko chakakosha kana kungoitira munhu akasununguka iwe.
Vhidhiyo meseji yakanyorwa pane iyo portal ichave nzira isina kujairika. Iyi ndiyo mhando yevhidhiyo avatar, iyo yaunosuma iwe pachako, udza zvishoma nezvako, farira muoni we "vhidhiyo avator". Taura zvaunonzwa, usazeze kutaurira kamera nezvezvakanaka nezvayakaipira, nezve izvo zvinodiwa izvo zvinofanirwa kunge zviri mune rako ramangwana hupenyu waunofambidzana naye. Kana ingo ratidza pachako.
Kuti uratidze kugutsikana kwako - tinya pane iyo interface yeiyo skrini "ita rumbidzo" - iwe unokurudzira wako anokumiririra. Nekudaro, iwe unozoratidza kutenderwa, iwe uchave unokwanisa kuratidza nyaradzo uye tsitsi, izvo, nekudaro, zvinofanirwa kukonzeresa mhinduro pakarepo. Ichi chiito chinogona kuratidzwa mune chero yakakodzera kesi: fungidziro inoratidzirwa, ine tarenda yakaratidzirwa, chero chiito chinonakidza chakarova mupfungwa inobwinya yeshoko "kudonha."
Usakanganwe chokwadi chekuti iye anokwanisa kuratidza zvisina kunaka. Kana kusatenderwa, kusingaregererwi, kutyorwa kuri pachena kweyekukurukurirana kwevhidhiyo kunoonekwa - isa chichemo chero nguva. Pamusoro pekuti munhu anopindirana achanzwisisa kuti ivo vari kukanganisa, isu tichagamuchirawo chichemo uye isu tichazvifunga uye totora matanho nekukasira. Tichave tichionga nerubatsiro rwenyu mukurwisa vanotyora, saka tichadzivirira vhidhiyo yekutaura kubva kune vasina kunaka vatori vechikamu vasingazviremekedze uye neyakagadzwa hwaro, uye zvakanyanya kudaro - vanokugumburisa iwe semunhu.
Pakutanga (yatotaurwa pamusoro) - zvakakurudzirwa kunyoresa. Basa nderekuuya pamwe nekunyora mune yakatarwa munda "zita remadunhurirwa" - zita riri mune chat, ravanogona kuziva. Izvo hazvidikanwe kunyora zita rako uye zita remhuri - zvakakwana kuti uwane zita rinosekesa, iro zita rawakarota kwenguva refu, zita remadunhurirwa remhuka yako yaunoda - mune zvese, zvinoverengeka. Uye zita remadunhurirwa rekutanga uye risingakanganwike ivimbiso yekuti hauzokanganwike uye ukawanikwa mushure menguva. Pane saiti - iwe unogona kusazivikanwa zvachose uye usatombo kunetseka muvhidhiyo chat roulette.
Haufarire kutaridzika kwechimiro? Iwe unozvimiririra kumisikidza marongero ekuratidzira kwekunze, color gamut, sarudza iwo mavara anofadza, usapindire Mutauro uye kuratidzwa kwayo kunogona kuiswa panodikanwa, vanoshandisa chiRussia, asi sarudzo iri mumaoko ako, sezvavanotaura. Kushandisa nhaurwa yevhidhiyo chat kunounza mufaro wakanyanya, chero iwe uri mune yaunoda uye yakasununguka nharaunda!
Chinhu chakakosha chekuyera kuongorora chero chirongwa kana chirongwa chirongwa chemhando yavo dhizaini nekunyora. Mune mamwe mazwi, kune yakanyanya nyore manejimendi echirongwa, zvakafanira kuti zvishandiswe zvakakwana sezvinobvira. Uye usakanganwa kuti vatengi vanoshanyira zviwanikwa - iwe unofanirwa kupfuura matambudziko nekutadza kunoitika, zvirinani kudzivirira kwavo kuitika. Pakarepo vhidhiyo yedu yekukurukura roulette yakachengetedzwa zvakakwana neazvino anti-hutachiona software, iyo isingatenderi kubiridzira yedu system. Zvinotenderwa kunyoreswa - vanhu vanokatyamadza vane mifungo yakaipa - zvinongonyadzisa. Ivo havaratidze chishuwo chekusaswa zvisina maturo uye vosiya peji, nekudaro vachisiya vhidhiyo yekutaura kuitira kuti vawane nyore "purofiti". 99% kuitira kuti iwe ugone kuzorora munzvimbo yakachengeteka uye uzvipire iwe kuwana izvo zvakanaka. Unobtrusivenesskudanana uye nemamiriro akakwana - uyu ndiwo mushonga wekusurukirwa watinopa vashanyi vedu.
Kana vachipfuura maitiro, vashanyi vanosimbisa chibvumirano chavo nemitemo yemushandisi. Kana iwe uchibvumirana nechibvumirano, saka unobvuma kuzvibata zvine mutsigo uye kuve nekuzvidavirira pane zvaunoita, kuva anonzwisisa maererano nemitemo yese yetsika. Kubva kudivi redu - isu tinovimbisa kuvanzika kweruzivo iwe rwaunodoma. Iri zvakare ibasa redu kuona kunyaradzwa kwevhidhiyo chat yedu.
Tinoda kufadza vanhu vakatikomberedza. "Ichapa chii?" - mumwe munhu achabvunza. Mhinduro yacho yakapusa: zvinobatsira mukutsvaga basa, tsvaga anoshamisa mavara vanozove vanozivana uye shamwari nekuda kwekutaurirana; hapana munhu anodzivirirwa kubva kamwe kamwe "achirova mumoyo", sezvo hafu yepiri ichasangana nesu - hongu, kwave kwatove nezviitiko zvakadaro, isu tinotsanangura nyaya dzinoverengeka pazasi - kuratidza mienzaniso kubva kuhupenyu. Ita hurukuro zvakanaka, edza kuteerera uye "unzwe", uchinyemwerera uye kupindura zvine mutsindo kune anopindirana. Maiwe, haisi nyaya dzese dzinozvibata nenzira kwayo mumamiriro ezvinhu akadaro ... zvekuita? Sei kuifarira? Mhinduro: kudzidzira uye kuwedzera kuita!
2) Pane kudaro, zvakare kutaura? Vanoziva vanozvidza kana kudzivisa shamwari? "Kupatsanura mazwi": Imbomira muhurukuro, dzidza kufarira zviitiko zvevatakurwi. Teerera, bvunza mibvunzo - nekudaro uchivaita kuti vataure. Ivo vanhu vakakukomberedza vanoshevedzwa kuti vanzwisise kuti iwe unofarira uye hausi usina hanya navo. Vanoda kutaura chimwe chinhu, kwete kuteerera. Kana matanho asina kutorwa - iye chete muteereri anenge ari ... Hongu - iwe pachako.
3) "Mirayiridzo" - kuongororwa munyika ... Kana uine kana pasina chikonzero - ratidza. Nditende - vazhinji "vanotsamwisa". Wese munhu ane musoro wake uye haatombo paradzira zano. Iwe hautarise, asi iwe unorara nemazano akakosha. "Kupa": Seta chinangwa: kana iwe uchiraira mumwe munhu, ipapo chete pazvinenge zvichidikanwa, kana anopikisana pachake akabvunza. Saka vanozozvikoshesa - nezvose zvavanogona!
4) Uri kuwedzeredza here kana kuti unogona kunongedza kutaura kwako? Iwe unogona here kuchiva hupfumi hwekufungidzira? Funga, uchiita mumweya uyu, uchakurumidza kusangana nekusatenda. "Kurudziro": Usaedze kutsausa mupinduri. Simbisa kuti iyi ingano, kungoseka. Asi kana nzira iyi yekuitisa hurukuro "ichikupinza mukati" - usingazvione, uchave jester. Nomuzvarirwo, izvi zvinofinha - edza kuburitsa yakajeka yakajeka zvishoma nezvishoma uye unzwisise nguva yekutamba, kana zvirinani kurega kuita wit.
Yakagamuchirwa zvakapararira kuzivikanwa paInternet. Vhidhiyo yekukurukurirana roulette inosvitsa mashandiro, inovandudza chirongwa - kuitira nyore. Iyo sosi inodikanwa zuva nezuva nevagari venyika hombe yenyika (muhuwandu, anopfuura mamirioni miriyoni manhamba)! Huwandu hwevanhu vakanyoreswa hunowedzera zuva nezuva. Kana iwe ukaenda zuva nezuva, unogona kusangana nezvitsva uye zvitsva zviso! Uchasangana nevanhu vane pfungwa dzakafanana vanokutsigira uye nemaonero ako; iwe unofanirwa kukurukura navo zvinonakidza, zvine nharo nyaya. Ndeupi musoro wehurukuro yekutaura? Ehe, kwete chero! Kuwana misoro yakasiyana kubatanidza. Iko hakuna zvirambidzo pahuwandu hwehuwandu hwemeseji uye rexical maitiro, hapana kodhi yekupfeka kana zvimwe zviitwa zvinodiwa. Zorora uye uve zvako, sangana uye unakirwe. Kurudziro yedu kwauri kuverenga nekuremekedza. Kutaura nenzira imwecheteyo sezvazviri, mitemo yekutaurirana zvine hunyoro yakafanana kwese kupi:erudition, dzidzo, yakataurwa nenzira kwayo hurukuro - ndizvo zvinokosheswa kupfuura zvese. Zvazviratidza semunhu anoshamisa uye akasarudzika, zviratidze semunhu akasvinura uye akavhurika, uchijekesa kuti haufinha kutaura naye. Wedzera yako vhidhiyo yekutaura denderedzwa. Asi chinhu chikuru chinosara - kwete kunyepedzera kunge rakasiyana mhando, kuve iwe pachako.
Uchishandisa iyo yevhidhiyo chat, inzwa iwe pachechi pane iko kurongeka kwe "maitiro munharaunda". Muchokwadi, iwe uri munhu anonyara uye unononoka kuzviratidza iwe, watove wajaira izvozvo. Kana iwe ukashandisa yedu saiti uye kugona kwayo kuzere, iwe unogona nyore kuzvidzidzisa iwe pachako nezvehukama hwekufambidzana, nzwisisa musimboti wehunhu nevanhu vasingazivikanwe. Chiitiko chisingachinjike chinoshanda se "tutira" inoshamisa pane vaunoziva chaizvo. Iwe mupfungwa uchave wakagadzirira kusangana nematambudziko awakunda padanho rehunhu - panenge pasina zvipingaidzo. Kudzidzira kwakanakira munhu. Uye ichave isiri yekudzidza chete, asi zvakare zvichave zvinofadza kushandisa nguva yekuzorora mukambani inonakidza. Kutaura nevanhu vakanaka kunoita kuti unzwe mufaro, kunakidzwa, uye mabhenefiti ekutaurirana. Kutaura mune vhidhiyo kutaura - iwe uchave nemukana wekutiza kubva kunetseka kwemazuva ese,izvo zvatove zvinofinha.
Kutaurirana paInternet kunopa mukana wekutaura wega, zvakakwana zvachose. Nhau nezvako uye hupenyu hunonakidza - inokanda kure chinamira chekusurukirwa kubva mumweya. Chero nyaya - ichateererwa nechido, uye ichikuudza kune vakagadziridzwa mavara - iwe uchaona kutaridzika kutaridzika nguva dzese. Goverana dambudziko rako, kumbira gwara, kumbira rutsigiro rwehunhu - uye iwe unozonzwa kudziya kwoushamwari (kana uchivimba, hongu). Zvirinani "kudurura mweya" kumunhu asiri kujairana, uri chinhambwe - zvinova zvakanaka. Hauna chikwereti kuna ani zvake. Asi ndapota usakanganwa kuti kune imwe nhanho yekuvimba. Kunyange zvakadaro - iwe hauna kujaira zvachose, chero zvodii, iwe unoda kumuziva zvakanaka.
Zvinowanzoitika seizvi: vanhu vanowana mweya mweya mune emagetsi network. Mienzaniso mizhinji, kana chimwe chinhu chichibudirira paInternet pakati pevashandisi, chakashanduka kuita misangano yatove muchokwadi. Hukama hwakadai hune, sekutonga, iyo chete nzira: kuenderera, kuita uye pakupedzisira - muchato. Anopfuura mazana ezviuru zvemhuri pasi pano aripo nekuda kwehunyanzvi hwekuvandudza. Chero ani zvake anogona kudanana achishandisa kufambidzana saiti, foramu kana vhidhiyo yekutaura senge yakagadziriswa nzira. Kana paine kunzwa kwekusurukirwa, usanonoka zvaunofanira kuita kusvika mangwana - tenda kugona kwako, nyatsosvika pakutsvaga shamwari / shamwari. Tichabatsira nepatinogona napo; unogona kushandisa zvizere saiti yedu. Chat roulette inoitirwa zuva rakajairika, husiku uye kutsvaga (isu takambotaura - panogona kuve neakanaka chaizvo sevanhu vane pfungwa, shamwari).Aya haasi mazwi chete, nditende, zvese zviripo! Mukana uri mune hukuru tarisiro! Izvo hazvina kusara kuti kutanga kwehupenyu hutsva pamwe newaunoda ndeyekuti iwe uchave mushandisi weanonyanya kufarirwa mutauro weRussia-vhidhiyo yekutaura kana kwete? Zvichida kuti mushanyi akadaro akasurukirwa senge iwe uine kusagadzikana mumaziso ake - anozadza muminda yebvunzo, achitarisira kusangana nemweya wehama, anopenya anozoonekwa mumaziso ake, pachave nechimwe chirevo cherudo pachako nyika. Chinhu chikuru hachisi chekuzungunusa ruoko rwako nemutsara wakapusa: "izvi hazviitike" - iwe unoziva? Edza rako chairo ramangwana. Zvingangodaro, kana waita nhanho kuenda kumberi, ramangwana richauya kwauri uye timu ine hunhu yeprojekiti yedu inosimudza girazi rewaini chena inonaka, inotapira, inopenya yehutano hwakanaka, kugara zvakanaka mumhuri ...Izvo hazvina kusara kuti kutanga kwehupenyu hutsva pamwe newaunoda ndeyekuti iwe uchave mushandisi weanonyanya kufarirwa mutauro weRussia-vhidhiyo yekutaura kana kwete? Zvichida kuti mushanyi akadaro akasurukirwa senge iwe uine kusagadzikana mumaziso ake - anozadza muminda yebvunzo, achitarisira kusangana nemweya wehama, anopenya anozoonekwa mumaziso ake, pachave nechimwe chirevo cherudo pachako nyika. Chinhu chikuru hachisi chekuzungunusa ruoko rwako nemutsara wakapusa: "izvi hazviitike" - iwe unoziva? Edza rako chairo ramangwana. Zvingangodaro, kana waita nhanho kuenda kumberi, ramangwana richauya kwauri uye timu ine hunhu yeprojekiti yedu inosimudza girazi rewaini chena inonaka, inotapira, inopenya yehutano hwakanaka, kugara zvakanaka mumhuri ...Izvo hazvina kusara kuti kutanga kwehupenyu hutsva pamwe newaunoda ndeyekuti iwe uchave mushandisi weanonyanya kufarirwa mutauro weRussia-vhidhiyo yekutaura kana kwete? Zvichida kuti mushanyi akadaro akasurukirwa senge iwe uine kusagadzikana mumaziso ake - anozadza muminda yebvunzo, achitarisira kusangana nemweya wehama, anopenya anozoonekwa mumaziso ake, pachave nechimwe chirevo cherudo pachako nyika. Chinhu chikuru hachisi chekuzungunusa ruoko rwako nemutsara wakapusa: "izvi hazviitike" - iwe unoziva? Edza rako chairo ramangwana. Zvingangodaro, kana waita nhanho kuenda kumberi, ramangwana richauya kwauri uye timu ine hunhu yeprojekiti yedu inosimudza girazi rewaini chena inonaka, inotapira, inopenya yehutano hwakanaka, kugara zvakanaka mumhuri ...kuti mushanyi akadaro akasurukirwa kungofanana newe ane kusagadzikana mumaziso ake - anozadza muminda yemibvunzo, achitarisira kusangana nemweya wehama, anopenya anozoonekwa mumaziso ake, pachave nechimwe chirevo chekuzvida iwe nyika. Chinhu chikuru hachisi chekuzungunusa ruoko rwako nemutsara wakapusa: "izvi hazviitike" - iwe unoziva? Edza rako chairo ramangwana. Zvingangodaro, kana waita nhanho kuenda kumberi, ramangwana richauya kwauri uye timu yakanaka-yepurojekiti yedu ichasimudza girazi rewaini chena inonaka, inotapira, inopenya yehutano hwakanaka, kugara zvakanaka mumhuri ...kuti mushanyi akadaro akasurukirwa kungofanana newe ane kusagadzikana mumaziso ake - anozadza muminda yemibvunzo, achitarisira kusangana nemweya wehama, anopenya anozoonekwa mumaziso ake, pachave nechimwe chirevo chekuzvida iwe nyika. Chinhu chikuru hachisi chekuzungunusa ruoko rwako nemutsara wakapusa: "izvi hazviitike" - iwe unoziva? Edza rako chairo ramangwana. Zvingangodaro, kana waita nhanho kuenda kumberi, ramangwana richauya kwauri uye timu ine hunhu yeprojekiti yedu inosimudza girazi rewaini chena inonaka, inotapira, inopenya yehutano hwakanaka, kugara zvakanaka mumhuri ...ramangwana richauya kwauri uye timu ine hunhu yeprojekiti yedu inosimudza girazi rewaini chena inonaka, inotapira, inopenya yehutano hwakanaka, kugara zvakanaka mumhuri ...ramangwana richauya kwauri uye timu ine hunhu yeprojekiti yedu inosimudza girazi rewaini chena inonaka, inotapira, inopenya yehutano hwakanaka, kugara zvakanaka mumhuri ...
Kutora nguva yekuzorora neiyi nzira, mushure mezuva rakaoma rizere nemanzwiro, zvirinani pane kutarisa padenga rakanaka uye usingazive zvekuita uchinakidza. Iwe une mukana wakanaka wekusangana nevanhu vakanaka, vanodakadza vasina kusiya imba yako. Yakaipa, yakaipa manzwiro, hapana zvachose simba rekufamba famba kunze, asi mweya unofanirwa kuiregedza, zorora ... Uye mumugwagwa kune yakaipa mamiriro ekunze, slush, mvura, kupisa ... Kune akati wandei pane zvekuyedza sarudzo - kungaenda kunorara kana kuvhura webhusaiti yedu nemaviri anodzvanya mbeva. Kutaurirana, ita shamwari nyowani, chinhu chikuru hachisi chekugara pasina mukati memadziro mana, uchitambisa nguva yako corny pane chubhu TV, iyo yaunotarisa yega yemahara miniti. Ichave yakajeka uye inonakidza kubva pakutanga - iwe uchaona iwo maratidziro eshamwari kubva kudivi. Vachafunga kuti vari murudo kana shanduko huruasi hapana munhu anogona kutaura kuti ivo vanongonyudzwa muInternet. Makore mashoma apfuura - Iwe hauna kufunga nezve kupihwa kusangana. Nzira yekumisidzana nevatorwa kuburikidza nemazana ezviuru zvemakiromita, tichionana? Pasina kusiya imba yako - unogona kunakidzwa nenguva yako uchingoshandisa zvisina kujairika vhidhiyo yekutaura.
Nenzira, ini handirangariri kana takasarudza kutarisisa nzira iyi. Hausi kubva pamba pako wega. Tinogona kukurudzira vhidhiyo yekutaurirana kwauri uine chivimbo, hanya uye kutsungirira! Hapana zvimwe zviripo zvemugwagwa kana mubhadharo, hushoma hwenguva, simba, simba - pamunwe wako. Mushure mekurovedza muviri, iwe waneta nekuenda kwese, asi mundima yako, kana mafomu anokwezva, anoshamisira, anoyevedza achakwezva vanhu kune rimwe divi rekona, unogona kutozviona, handiti? Iye anopindirana achafarira nzira iyo shamwari yakavakwa zvakanaka inonyemwerera pa kamera. Hapana anozoona kuti uri kukamhina negumbo rimwe, kana kuti wakadhonza mhasuru ... Hauna kunwa kofi. Kupisa? Zvakaoma kufungidzira. Hapana munhu achakwanisa kutapurira. Muchokwadi, uku ndiko kubudirira munyika! Sangana uye uve unopenga unofara!
Saiti iwe yauri ikozvino inogadzirwa naVideoruletka, uye iko kunyorera chivakwa cheIyo Yakabatanidzwa neBadanga Limited., Tel. +66865819983. Iyi femu hombe ine vane ruzivo, vane hunyanzvi hunyanzvi mumunda weInternet tekinoroji uye software (yakashandurwa kubva mumutauro wechirongwa: software). Iko kukosha kwechokwadi kunoumbwa nevashandi, kugona, ruzivo rwebhizinesi ravo - usasiyane vasina hanya nebasa ravo raitwa. Kutenda kushanda nesimba, kuedza - nhasi tinogona kunakidzwa nemhando yepamusoro kushanda kwesicelo: videochat. Chido chekuvandudza sevhisi chinozoonekwa zvakadaro. Basa racho rinoitwa zuva nezuva, shanduko dzinoonekwa yega yega 2-3 mwedzi. Kana, kana uchisarudza classifiers yevaraidzo, maziso ako akawira pane yedu yevhidhiyo chat, ipapo iwe unonzwisisa mhando yepamusoro yebasa, nyore kushandisa.Basa redu rinopa vimbiso yekuti iwe unozoshandisa chete emhando yepamusoro masevhisi, chengetedza yakasarudzika inoshanda sisitimu sosi yacho uye mukana unoshanda. Videoruletka - uyo ane hanya nemufananidzo wavo uye zvinoonekwa nevashanyi vavo. Ive neshuwa kuti urikushandisa chete yakavimbiswa mhando masevhisi kubva kune vakavimbika vanogadzira vanoteerera chibvumirano chemushandisi.kutevedzera chibvumirano chemushandisi.kutevedzera chibvumirano chemushandisi.
Uri kutsvaga nzira inokurumidza yekusangana nemusikana akangwara uye akanaka? Webhu yekukurukura roulette CoMeet (yeChirungu vhezheni yeCooMeet) inokutendera iwe kuti utaure nevakadzi vanobva kunyika dzakasiyana pasina kusiya imba yako. Instant kubatana, yemhando yepamusoro-tsananguro vhidhiyo kufona, hapana kushushikana uye chete vakanakisa vanopindirana avo vanogara vachisangana nekunyemwerera.
Isu tinoziva kukosha kwenguva yanhasi: isu tinogara tichimanikidzwa kuisa pamberi, kusevha nekumhanyisa, uye zvakadaro hatina nguva yekuita zvese zvatakaronga. Mune ino nyonganiso, kufambidzana uye hukama kazhinji zvinodzikira kumashure. Iyo yepamutemo webhusaiti yeKumit inovimbisa yemhando yepamusoro kutaurirana chete nevanoonekwa vasikana - online misangano, vatsva vanozivana uye mukuru mufaro.
Kungoita kamwe chete uye yedu inonzwisisika inoenderana sisitimu inokubatanidza iwe neimwe yezviuru zvevatsvike vausingazive Ive neshuwa, vese vasikana vakauya pano kuzosangana, kutaurirana uye kuvaka hukama. Hapana rimwe basa remahara rinogona kupa iro rakaenzana rakakwira sevhisi seQMIT chat:
Wese munhu aifarira online roulettes pamwe anorangarira iwo machats akamira pakatangira kwekutaurirana kwekusarongeka. Aya aive Omegl naChatRulet, akaonekwa kumashure muna2009. Wekutanga akauya kwatiri kubva kunze kwenyika, wechipiri - brainchild yeRussia mukomana wechikoro Andrey Ternovsky.
Ose maviri mawebhusaiti aive akavakirwa pamusimboti mumwechete: kutaurirana nevasina kupindirana kubva kumativi ese epasi. Uye kunyangwe Omegle aine kutanga kwemwedzi yakati wandei, yaive ChatRoulette iyo yaitonga iyo show kwenguva yakareba. Nekudaro, vese vaviri chat chat vakapedzisira vatarisana ne "chirwere" chimwe chete, icho chinoramba chiri dambudziko uye chinoodza moyo vazhinji kuti vasashandise.
Izvi ndezvechokwadi, zvisina kukodzera zvemukati. Munyika yakanaka, vanhu vakanaka uye vane hushamwari vanofanirwa kupinda muvhidhiyo roulette, avo vanoda kuzivana, kutaurirana, uye kupa mumwe nemumwe moyo wakanaka. Saizvozvo:
chinotevera chinongedzo chinokupa iwe mukana wekunakidzwa static mufananidzo kana vhidhiyo ine zvakazara kushambadzira zvemukati. Hongu, PR vanhu havagone kuramba fungidziro.
Kutsvaga rudo uye kuvaka hukama kwave kuri nyore zvikuru kubva pakufambidzana masevhisi akatanga kukura online. Uye yekukurukura roulette rave chishandiso chakakura chechinangwa ichi, kujoina masocial network uye nzvimbo dzekufambidzana. Asi kusiyana nemaviri ekupedzisira, zviri muhurukuro yevhidhiyo paunogona kuona maziso eanonakidza interlocutor, kunyemwerera kwake uye kunzwa zvisinga tsanangurike manzwiro ehukama kunyangwe ari chinhambwe chemazana emakiromita.